China BASBALL MEDALS ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Kingtai
Ngwado egwuregwu baseball anyị ga-abụrịrị ebe obibi gị na ndị egwuregwu gị! Uwe olu na ibu nke nhọrọ. Anyị na-eti ndị asọmpi anyị aka, ị nwekwara ntụkwasị obi gbakwunyere na ị na-emeso onye nrụpụta amaara ama na ọtụtụ puku ndị ahịa afọ ojuju! Lọ ahịa anyị nnukwu nhọrọ nke baseball medals n'okpuru, na-ele anyị baseball medal ibu ego site na-ahọpụta a nrite n'okpuru! Anyị gbalịrị ike anyị niile ịnye ọmarịcha nhọrọ nke akara bekee baseball yana ụfọdụ nhọrọ nhọrọ baseball. Olileanya ị ga-ekweta na anyị baseball nhọpụta selections na-elu mma, na pụrụ iche iji mee ka gị kwuo dị ka a home ọsọ. Anyị na-ebukwa nhọrọ ndị mara mma nke Baseball Trophies na Plaques.
Baseball laghachiri na anyị nwere trophies baseball na medal maka ị ga-eji cheta The Epic (ma ọ bụrụ na ọ gbuo oge) oge 2020. Họrọ n'etiti ihe eji azụ ụlọ anyị na ihe ndị anyị ji ewu ewu, bọọlụ baseball glove. A na-enweta ya n'ọtụtụ nha, ụdị na agba dị iche iche, anyị nwere ihe maka ụdị na mmefu ọ bụla, yana n'ezie, ihe osise n'efu na akparaghị ókè! Hazie gị baseball trofi taa na-azọpụta anyị ala ahịa na nke ukwu ego!
Nke gara aga: AKWALKWỌ AKWARKWỌ
Osote: Bọọlụ Nkata
Ngwunye ọla 3d
Award ọla ọla
Ngwongwo Egwuregwu Dị ọnụ ala